Myanmar and Malaysia sign Agreement on Establishment of Joint Commission for Economic, Scientific and Technical Cooperation – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
Myanmar and Malaysia sign Agreement on Establishment of Joint Commission for Economic, Scientific and Technical Cooperation
Myanmar and Malaysia sign Agreement on Establishment of
Joint Commission for Economic, Scientific and Technical Cooperation
In conjunction with the AMM Retreat held in Bagan, signing ceremony for the Agreement between the Government of the Republic of the Union of Myanmar and the Government of Malaysia on the Establishment of the Joint Commission for Economic, Scientific and Technical Cooperation was held at Banquet Hall, Aureum Palace Hotel, Bagan on 17th January 2014.
The Agreement was signed by U Wunna Maung Lwin, Union Minister for Foreign Affairs of the Republic of the Union of Myanmar and His Excellency Dato’ Sri Anifah Aman, Minister for Foreign Affairs of Malaysia. Also present at the ceremony were U Tin Oo Lwin, Deputy Minister for Foreign Affairs of the Republic of the Union of Myanmar and Senior Officials from Ministries of Foreign Affairs of Myanmar and Malaysia.
Under this Agreement, Myanmar and Malaysia will establish on Myanmar–Malaysia Joint Commission to facilitate consultation and cooperation in the areas of economic, scientific and technical between the two countries to expand and enhance bilateral relations and cooperation onalasting and long term basis.
Union Minister H. E. U Wunna Maung Lwin and Minister for Foreign Affairs of
Malaysia H.E. Dato’s Sri Anifah Aman sign the Agreement.— Photo MNA
မြန်မာနှင့် မလေးရှားအစိုးရတို့အကြား စီးပွားရေး၊ သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ဆိုင်ရာ ပူးတွဲကော်မရှင် တည်ထောင်မှုဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ် လက်မှတ်ရေးထိုး ချုပ်ဆို
ပုဂံမြို့တွင် ကျင်းပလျက်ရှိသည့် အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေးနှင်‌့ဆက်စပ်လျက် ၂၀၁၄ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၇ ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာ နိုင်ငံတော် အစိုးရနှင့် မလေးရှားအစိုးရတို့အကြား စီးပွားရေး၊ သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ဆိုင်ရာ ပူးတွဲကော်မရှင် တည်ထောင်မှုဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ် လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲတစ်ရပ်ကို ပုဂံမြို့၊ ရွှေနန်းတော်ဟိုတယ်၌ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါ သဘောတူစာချုပ်ကို နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝဏ္ဏမောင်လွင်နှင့် မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီး ဒါတို ဆရီ အာနီဖန် အာမန်တို့မှ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါသည်။ လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲ အခမ်းအနားသို့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးတင်ဦးလွင်နှင့် မြန်မာ ၊ မလေးရှား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အဆင့်မြင့် အရာရှိကြီးများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
မြန်မာ – မလေးရှား စီးပွားရေး၊ သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ဆိုင်ရာ ပူးတွဲကော်မရှင် တည်ထောင်မှု သဘောတူစာချုပ်ကို နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုတို့ ရေရှည်တည်တံ့ခိုမြဲစေရေးအတွက် တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးကို အခြေခံ၍ နှစ်နိုင်ငံအကြား စီးပွားရေး ၊ သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာကဏ္ဍတို့တွင် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုများ ၊ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုများပြုလုပ်ရာတွင် အထောက်အကူပြုစေရန်ရည်ရွယ်၍ ဖွဲ့စည်း တည်ထောင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၇ ရက်